Indawo yokuhlala yaseTagaytay efikelelekayo - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseTagaytay efikelelekayo
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMira
Iyunithi yeStudio yeTagaytay enebalcony ebekwe kufutshane neTagaytay Rotonda. Kufuphi neendawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, ukutya okukhawulezayo, ivenkile enkulu kunye nezithuthi zikawonke-wonke. Ifakwe ibhedi ephindwe kabini, ibhedi yesofa e-1, itafile yokutyela kunye nesitulo, izinto zokupheka, ireferensi, imicrowave, iyunithi eneairconditioning ngokupheleleyo, i-smart tv kunye ne-wifi. Ilungile kundwendwe olunqwenela ukuphumla ngelixa lonwabela i-ambience yaseTagaytay
Qaphela: Kuphela ngabantu abagonywe ngokupheleleyo abaya kuvunyelwa
**Zonke iindwendwe mazibonise ikhadi lokugonya kunye nesazisi esisemthethweni esikhutshwe ngurhulumente**
**Ugonywe ngokupheleleyo kwi-18yrs ubudala ukuya kuma-59yrs ubudala kuphela **
Iyunithi yethu inezixhobo zasekhitshini ezisisiseko ezifana nefriji, i-induction cooker, i-kettle ye-multifunction, imbiza yokupheka kunye nepani yokuqhotsa kunye neetafile ezifana neepleyiti, iikomityi, izixhobo kunye njl.
Amashiti amatsha ebhedi, iphepha lethishu, ishampu, iconditioner, ukuhlamba umzimba, isepha yezandla elulwelo kunye nolwelo lokuhlamba izitya. Ingubo ekwabelwana ngayo iya kubonelelwa ngabantu ababini kuphela.
Igumbi lokuhlambela elahlukileyo elinesifudumezi samanzi kunye nendlu yangasese ene-bidet.
Ukufikelela simahla kuphahla kunye nendlela yokubaleka kunye ne-360 degree view of Tagaytay. I-Roofdeck ivulwa ukusuka kwi-6AM ukuya ku-10AM kunye ne-4PM ukuya ku-8PM kuphela.
Iqula lokuqubha likufuphi ngenxa yeCovid 19.
Kukho indawo eninzi yokuhlawula yokupaka ekhoyo ngaphakathi kwisakhiwo kunye nomrhumo ohambelanayo we-P50 ngosuku ngoMvulo ukuya kuLwesine kunye ne-P50 ngokungena ngolwesiHlanu ukuya ngeCawa nangeeHolide. Ihlawulwa xa kungenwa. Iindawo zokupaka ngaphakathi kwisakhiwo ziyafumaneka kumntu ofike kuqala.
Ukupheka kakhulu kunye nokuqhotsa ukutya okunukayo okufana nentlanzi, iskwidi, intlanzi eyomisiweyo, i-bagoong nokunye okunjalo akuvumelekanga.
Abaphuli mthetho baya kuhlawuliswa i-1,000 pesos.
Intlawulo eyongezelelweyo yelinen ezongezelelweyo, iingubo kunye netawuli.
Akukho zilwanyana zasekhaya ezivunyelweyo ngaphakathi kwiyunithi.
Akukho ndwendwe. Kuphela ziindwendwe ezibhalisiweyo ezivumelekileyo kwiyunithi.
Nceda ungaphumi kwi-netflix. Asiyi kukunika iinkcukacha zokungena kuwe.
Qaphela: Ukujonga okuguquguqukayo kunye nokujonga ixesha akuvumelekanga. Nceda uqaphele ukujonga okusemgangathweni ngexesha kunye nexesha eliqhelekileyo lokujonga iyunithi. Intlawulo eyongezelelweyo iyafuneka kuso sonke isicelo ngaphambi kwexesha elimiselweyo kwaye zonke izicelo emva kwexesha eliqhelekileyo lokuphuma kweyunithi kwaye zixhomekeke ekufumanekeni.
QAPHELA: Isicelo sotshintsho okanye utshintsho lomhla siya kuvunyelwa kube kanye kuphela kwaye kufuneka senziwe kwiveki e-1 phambi komhla wokubhukisha ngokuxhomekeke ekufumanekeni, ukuba akunjalo asikwazi ukwamkela isicelo sakho sotshintsho.
Ukuhlolwa kuya kwenziwa phambi kokuba kukhangelwe, nayiphi na ilahleko okanye umonakalo uya kuhlawulwa ngokufanelekileyo. Ilahleko yekhadi elingundoqo nalo liya kuhlawulwa ngokufanelekileyo.
4.83 · Izimvo eziyi-101